Kooxaha Chelsea Iyo Man United Oo Ku Dagaalami Doona Saxiixa Christian Eriksen
HomeWararka CiyaarahaKooxaha Chelsea iyo Man United oo ku dagaalami doona saxiixa Christian Eriksen
Kooxaha waa weyn ee Premier League ee Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ugu horeeyaan suurtagalnimada ay ku heli karaan kubadd sameeyaha Inter Milan Christian Eriksen marka suuqa kala iibsiga dib loo furi doono bisha Janaayo.
Xiddiga reer Denmark ayaa ku dhibtooday inuu soo jiito kooxda Antonio Conte ’tan iyo markii uu kaga soo biiray Tottenham horaantii xagaaygii hore.
28 jirkaan ayaan caawin ama dhalin wax gool ah tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, halka uu kaliya dhaliyay afar gool iyo seddex caawin 33 kulan oo uu u saftay Inter Milan tan iyo markii uu yimid.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa soo jeedisay in Red Devils iyo Chelsea ay qorsheynayaan inay bisha Janaayo u dhaqaaqaan kubadd sameeyihii hore ee Spurs, kaasoo lagu heli karo lacag dhan 18 milyan oo ginni.
Sida laga soo xigtay Corriere dello Sport, waxaa jira xiiso dhab ah oo ka imanaya kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska, halka kooxda Frnak Lampard sidoo kale la rumeysan yahay inay si dhow isha ugu heyso horumarka ku xeeran kubad sameeyaha.
Eriksen ayaa shabaqa soo taabtay 69 jeer wuxuuna caawiye ka ahaa 89 caawin 305 kulan oo uu u ciyaaray Spurs intii uu joogay England ka hor inta uusan ku biirin Inter Milan.
Kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale dhawaan lala xiriirinayay inay xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Denmark kaasoo la rumeysan yahay inay 30m ka dulqaadi karaan kooxda reer England ee Chelsea iyo Man United.